ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား | Misoprostol ေသာက္ျပီး ေသြးသြန္ျခင္း သို႕ ကိုက္ခဲျခင္းျဖစ္တတ္ပါသလား။? | HTU
ဘယ်သူတွေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးကို အသုံးပြုနိုင်လဲ။
အကယ်လို့ ကျွန်မကအရမ်းဝတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင် ဆေးကိုပိုသောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
မအရင်က သားကြောဖြတ်ဖူးသော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး ၎င်းမှာ သားအိမ်ပြင်ပတွင်ကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း ဖြစ်နေပါသည်။ယခုလက်ရှိ ကိုယ်ဝန်ထပ်ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး သောက်သုံးဖို့ စိတ်ချရပါ့မလား။
Misoprostol ကို လျာအောက်တွင်ထားပြီး သောက်သင့်လား သို့မဟုတ် မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သင့်လား?
ေဆေးနှစ်မျိုး mifepristone နှင့် misoprostolတွဲသောက်သုံးခြင်းနှင့် misoprostol တစ်မျိုးတည်းသောက်သုံးခြင်းက မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
Misoprostol များသုံးပြီး သာမာန်အားဖြင့် သွေးဆင်းမှုနှင့် ကိုက်ခဲနာကျင်မှု မည်မျှ ရှိနိုင်သနည်း။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနင့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီးပါက အနာဂတ္ေမြးဖြားမည့္ကေလးမွာ အထိအခိုက္ရွိႏိုင္ပါသလား။
အမျိုးသမီးအချို့တွင် ပုံမှန်သွေးဆင်းသကဲသို့ သွေးများဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သွေးဆင်းမှုသည် ပုံမှန် သွေးဆင်းမှုထက် ပမာဏပိုနိုင်ပါသည်။ ပထမစစချင်းသောက်သုံးပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်း သံပုရာသီအရွယ်လောက်ရှိ သွေးခဲများကျလာနိုင်ပါသည်။ အချို့အမျိုးသမီးများတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီး သွေးဆင်မှုမှာလည်း ပုံမှန်ရာသီလာသလိုပဲ သွေးဆင်းနိုင်ပါသည်။